Fonjamby-Fiofanana: anio sy rahampitso ny fanadinana - ewa.mg
Fonjamby-Fiofanana: anio sy rahampitso ny fanadinana
News - Fonjamby-Fiofanana: anio sy rahampitso ny fanadinana
Mizotra araka ny tokony ho izy ny
fiofanana ho mpanazatra “niveau 2”, taranja fibatana fonjamby,
tanterahina etsy amin’ny kianja mitafo Ankorondrano. Mialoha ny
hanomezana Mari-pankasitrahana ireo mpiofana, hiatrika fanadinana
izy ireo anio sy rahampitso. Adina an-tsoratra sy fampiharana moa
no hataon’izy ireo amin’izany. Tsiahivina, 10 andro ny
faharetan’ity fiofanana ity ary efa nanomboka ny herinandro lasa
teo izany. Mpampiofana manana ny maha izy ny mizara traikefa,
manam-pahaizana iraisam-pirenena malagasy, hahitana an’ i
Harimalala Solomampionona Rakotoarisena. Miisa 20 mianadahy ny
miofana ary avy amin’ny ligy 6, Analamanga, Atsinanana, Alaotra
Mangoro, Itasy, Boeny ary Vakinankaratra. Nambaran’ny mpampiofana
fa nisy fitohizana satria ireo niatrika ny “niveau 1” ihany ireto
manaraka ny fampianarana ho an’ny “niveau 2” ireto. Izany hoe,
efa manomboka miditra lalindalina kokoa amin’ny “planification”,
“périodisation”, “anatomie”ary ny “blessure”. Antenaina, araka
izany fa hitondra fivoarana eo amin’ireto mpiofana ireto, raha ny
nambaran’ny mpampiofana hatrany. Azo lazaina ho fohy rahateo ny
fotoana kanefa mbola maro ny tiana hampitaina ka inoana fa any
amin’ny fampiharana no hanatevina ny fahalalany ny mpiofana.
L’article Fonjamby-Fiofanana: anio sy rahampitso ny fanadinana a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 25/09/2020
Orinasa Base Toliara: miandrandra fampandrosoana ny mponina
Miharesy lahatra hatrany ny mponina any Toliara sy ny any amin’ny toeram-pitrandrahana fasimainty any Ranobe sy ny manodidina, ny voka-tsoa entin’ny fisian’ny orinasa Base Toliara. Hitondra fampandrosoana ho an’ny mponina sy ny faritra, ary mba tsy hisy intsony ny filazana fa « fasan’ny tetikasa ny any Toliara ».Natao, ny alarobia 31 jolay teo, ny fombafomba, “titike”*, midika ho fampihavanana, sy fandravonana ny disadisa eo amin’ny mpomba sy ny manohitra ny fisian’ny tetikasa Base Toliara, hitrandraka fasimainty, any Ranobe Toliara, faritra Atsimo Andrefana. Fotoana ihany koa nangatahana tsodrano, hananganana ny fotodrafitrasa hiantsonan’ny sambo any Andaboly, morontsiraka, hitaterana ny fasimainty avy any an-tanety mankeny afovoan-dranomasina, mialoha ny hitondran’ny sambo ny akora mankany ivelany.Nanatrika ny fotoana ny manam-pahefana sy ny tompon’andraiki-panjakana samihafa, notarihin’ny prefen’ny faritra Atsimo Andrefana, ny mpitandro filaminana, niaraka amin’ny mpitantana ny orinasa Base Toliara. Teo koa ny ankolafin’ny mponina, ny fikambanana samihafa, toy ny fikambanan’ny zana-driaka ivondronan’ireo mpanjono (Fivetelo, Vezo Tealongo Besakoa, ny fikambanana Nosivato Miray Anketraka (ANMA), ny fikambanan’ny zatovo tsy an’asa any Toliara (ZTAT), sns.Maro ny zanak’i Toliara manana diplaomaAnisan’ny solotenan’ny olobe any an-toerana nandray fitenenana i Soafilira Cinah, nilaza fa nanohitra ity tetikasa fitrandrahana fasimainty ity izy ireo tany am-boalohany satria tsy mazava ny fototry ny tetikasa. Saingy, resy lahatra ankehitriny, ary miandrandra haingana ny hanatanterahana azy mba hitondra fampandrosoana ny faritra Atsimo Andrefana sady hanome asa ny tanora ary tsy ho fasan’ny tetikasa intsony i Toliara. Maro rahateo ny zanak’i Toliara manana diplaoma maniry hiasa.Voakasik’ity tetikasa Base Toliara ity ny kaominina efatra ahitana fokontany 18. Nilaza ny filohan’ny filankevitra monisipaly ny kaominina Tsihanisia fa tsy misy intsony ny tsy fifankahazoana eo amin’ny mponina, koa vonona hiasa ny vahoaka sy ny tanora. Notsoriny fa efa maro ny fotodrafitrasa naorin’ny Base Toliara, toy ny famatsiana rano madio fisotro, ny fanamboaran-dalana amin’ny alalan’ny asa tana-maro, ny fananganana tohodrano sy lakandrano, ny famatsiana fitaovam-pamokarana, sns.Tsy mankarary ny fasimaintyNitsotra ny manamboninahitra zandarimaria, sady filohan’ny fikambanan’ny Vezo, fa nanohitra tokoa izy tany am-boalohany, saingy nihemotra izy taty aoriana. « Tsy ho izaho mihitsy no hanakana ny fampandrosoana aty an-toerana”, hoy izy.Tafaresaka tamin’ny filohan’ny faritra Anosy (misy ny tetikasa QMM) ihany koa ity manamboninahita ity, fony izy filohan’ny faritra Atsimo Andrefana, ary nilaza taminy fa tsy mankarary ny fasimainty. Nanamafy izany ny tale jeneralin’ny Base Toliara, Ramahefarivo Jean Bruno, fa “araka ny tatitry ny INSTN (Ivontoeram-pirenena mikasika ny teknolojia nokleary), ny taona 2013 sy 2018, tsy atahorana ho an’ny olombelona ny fasimainty.“Esory ny sakana”, hoy ny préfetNilaza ny préfet-n’ny faritra Atsimo Andrefana, i Vladmir Edmond, fa “aoka isika tsy hamita-tena ka raha sendra marary dia ailika any amin’ny Base Toliara ny nahatonga ny aretina. Manana bokin’andraikitra ity orinasa ity ary manara-maso ny fanjakana”. Etsy ankilany, nambarany fa nahaheno tatitra izy fa misy manao sakana any akaikin’ny toerana hananganana ilay fotodrafitrasa amoron-dranomasina. Hentitra ny nanomezany baiko, “esory haingana teo izany sakana izany, anaro ny zanatsika, aoka tsy ho tia ady na korontana satria samy Malagasy isika”.Njaka Andriantefiarinesy Fandaharam-potoan’ny Base Toliara2001 : Fahazoan-dalana hikaroka2012 : Fahazoan-dalana hitrandraka2015: Fahazoan-dalana ara-tontolo iainana2017: Nohavaozina ny fahazoan-dalana hitrandraka2019: Fanadihadiana ny fanorenana ny fiantsonan’ny sambo2020: Fanamboarana ny fotodrafitrasa2021: Fitrandrahana ny fasimaintyFaharetan’ny fitrandrahana: 40 taona amin’ny velaran-tany 7 000 ha. Tsy ao anatiny ny faritra arovana misy ny alan’ny Mikea. Hoy izy ireo…I Régis : Nanohitra izahay tany aloha satria nahaheno fa mankarary ny fasimainty. Nazava aminay anefa fa diso tanteraka izahay ary mahatsapa ankehitriny fa ilaina ny fampandrosoana entin’ny Base Toliara. Andrasanay ao anatin’ny fikambanan’ny zana-driaka (mpanjono) ny hamatsiana fitaovana toy ny lakana, ny fianarana ho an’ny ankizy, ny asa ho an’ny tanora tsotra sy ny manana diplaoma, ny fitaovam-pamokarana ho an’ny vehivavy, toy ny mpanao asa tanana avy amin’ny akorandriaka, sns.I Edmond: Fantatray ny fahasoavana entin’ny Base Toliara, ankehitriny. Anisan’ny nifampiraharahanay fokonolona aminy ny fananganana fotodrafitrasa ilain’ny vahoaka, toy ny famatsian-drano sy ny herinaratra, ny toeram-pitsaboana sy fianarana. Eo koa ny fangatahanay fitaovana hitahirizana hazandrano eto Ambohitrabo, ny fiofanana ho an’ny mponina, sns. L’article Orinasa Base Toliara: miandrandra fampandrosoana ny mponina a été récupéré chez Newsmada.
Isoanala – Betroka: trano fanamboarana basy sy basy telo saron’ny zandary
Ravan’ny zandary ny toerana fanamboarana basy ao kaominina ambanivohitr’Isoanala, distrikan’i Betroka, ny zoma lasa teo. Miray tsikombakomba amin’ireo dahalo ny mpanamboatra ireto fitaovam-piadiana ireto…Basy lava telo efa vita rafitra (iray efa vita sy basim-borona roa tsy misy taratasy) ary basy roa vao an-dalam-pandrafetana ary fanamboarana basy. Ireo ny fitaovana hitan’ny zandary avy ao amin’ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena ao Isoanala, distrikan’i Betroka, ny zoma lasa teo. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, nahazo loharanom-baovao izy ireo fa misy olona atao hoe Rata mipetraka ao Ankoraoky, fokontany Lavalila, kaominina ambanivohitr’Isoanala, distrikan’i Betroka voalaza fa mpanamboatra sy mpivarotra basy ho an’ny dahalo. Nidina avy hatrany tany an-toerana ny zandary ka tratra tao avokoa ireo basy rehetra ireo. Nambaran’ny zandary fa tsy tao an-toerana ilay olona voalaza fa mpanamboatra basy fa ny rahalahiny no tratran’ny zandary tao an-trano.Basy Mas 36 iray koa azon’ny zandary tao Ambalamanakana distrikan’Ambositra, ny asabotsy vao mangiran-dratsy teo. Nahazo angom-baovao ny Kolonely kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana fa hoe misy olon-dratsy mpiray tsikombakomba amin’ny dahalo mitazona basy mahery vaika ao Ambalamanaka. Nihazo ilay toerana avy hatrany ny zandary notarihin’ny lefitry ny kaompanian’ny zandarimaria Ambositra ka hita tao tokoa ny basy Mas 36 ora. Nogiazana avy hatrany ilay basy ary noraisim-potsiny ilay olona voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fihazonana ity fitaovam-piadiana mahery vaika ity. Nohamafisin’ny zandary fa dimy izay ny basy mahery vaika tratra, tao anatin’ny telo herinandro teo.Jean ClaudeL’article Isoanala – Betroka: trano fanamboarana basy sy basy telo saron’ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Fanabeazana sy Bianco: hatao taranja any an-tsekoly ny ady amin’ny kolikoly
Notanterahina tetsy Antaninarenina ny atrikasa fankatoavana ny fametrahana ny amin’ny kolikoly ao anatin’ny fandaharam-pianarana. Tanjona ny hametraka ny ady amin’ny kolikoly ho taranja mihitsy hatao any an-tsekoly.Amin’io taom-pianarana vaovao 2019-2020 io, efa hisy ny kilasy sasantsasany amin’ny EPP sy ny CEG ary ny lycée hianatra izany taranja izany. Hatomboka tsikelikely io fampidirana ny ady amin’ny kolikoly ho taranja io fa hahenika ny kilasy rehetra kosa any aoriana.Tanjona iarahan’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) sy ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena ny hanana taraka lavitry ny kolikoly. Fantatra fa zava-dehibe ao anatin’izany ny fanabeazana, ny fisorohana ary ny fampiharan-dalana.Mila atomboka any amin’ny fanabeazana ny ankizy, araka izany, ny ady amin’ny kolikoly haha olom-banona azy sy hibeazana ny fisainany dieny mbola kely ho lavitr’izany kolikoly izany. Ampiarahina amin’ny fanabeazana momba ny fanajana ny soatoavina, toy ny fihavanana, izany hahamora raisina ny fampitana ny hafatra.Mbola hisy ny drafitrasa mazava hapetraka amin’ny fampiharana ity taranja ity any an-tsekoly. Hisy ny fiofanana omena ny mpampianatra ary indrindra, ny karazana tahirin-kevitra ilain’ny mpampianatra hanamorana ny fampitana ny hafatra mitovy lenta amin’ireo mpianatra.Efa betsaka ny fakan-kevitra natao mahakasika ity ady amin’ny kolikoly any am-pianarana ampidirina anaty fandaharam-pianarana ity. Efa nisy ny fandravonana izany fakan-kevitra izany ka izao faranana amin’ny fankatoavana azy izao ho azo ampiharina amin’izay.Tatiana AL’article Fanabeazana sy Bianco: hatao taranja any an-tsekoly ny ady amin’ny kolikoly a été récupéré chez Newsmada.
Fanoherana ny fitondrana: mbola hiofana ireo mpanao politika mpanohitra
Tsy mbola mahafeno ny fepetra. Nihaona teny Anosy, ny faran’ny herinandro teo ny fivondronamben’ny mpanohitra. Sambany ny fiarahana tamin’ireo maniry ny hivondrona ho mpanohitra eto amintsika. Anisan’izany ny mpanorina ny antoko Tim.Anisan’ny nasongadin’ny filoha nasionalin’ny Tim, Ravalomanana tamin’ny lahateniny tamin’izany fa ilaina ny fanofanana ireo mpanao politika. “Tsy mety raha mpitarika antoko na mpanao politika nefa tsy mahalala akory ny fanoherana… Hanafatra manampahaizana hanofana isika… Inona ny antom-pijoroan’ny mpanohitra ? Ny fotokevitra ijoroany sy ny fiainana ny demokrasia… Tsy misy fitondrana na firenena mandeha raha tsy misy mpanohitra. Lasa manao danin’ny kibony ny mpitondra ”, hoy izy. Niaiky ny tenany fa misy ny fitiavan’ireo mpanao politika hitondra ny anjara biriky ho an’ity firenena ity. Ilaina ny mangarahara sy ny fihenoana ny feon’ny mpanohitra. Efa lany andro ny fanapenam-bava ny antoko mpanohitra ataon’ny mpitondra manoloana ny teknolojia sy ny fandrosoana efa misy izao, araka ny nambarany. Novakiny koa ny famoahana haingana ny didy fampiharana ny lalàna mifehy ny fanoherana. “Mbola tsy nampiharina io ka tsy misy antony tokony hanovana izany lalàna izany”, hoy izy.Tokony ho mailo amin’ny manodidina azy ny filoha Nitodika amin’ny mpitondra ny tenany ka nilaza fa tokony hojerena ihany koa ny olona manodidina ny filoham-pirenena na ireo tandapa. Eo koa ny nanolorany hevitra fa tokony hofehezin’ny filoha ny vola vahiny ary atao ny hisian’ny tahiry amin ‘izany. Eo koa ny fiarovana ny vahoaka sy ny tany… “Anisan’ny maika eto amin’ny firenena ny resaka sakafo… Tsy tena mitombina amin’ny atao ny mpitondra fa taitra sy entanim-po fotsiny… Ilaina ny fanadihadiana lalina”, hoy izy.Tsiahivina fa marobe ireo mpanao politika nanatrika ity fihaonana ity. Na izany aza, tsy nandalo na nisedra ny safidim-bahoaka ary tsy manana depiote ny maro amin’izy ireo.Synèse R. L’article Fanoherana ny fitondrana: mbola hiofana ireo mpanao politika mpanohitra a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa: hanangana fotodrafitrasa ny Egypsianina
Nanatitra ny taratasy fanendrena azy hiasa sy honina eto Madagasikara amin’ny filoha Rajoelina Andry, omaly teny Iavoloha, ny masoivoho vaovao an’i Ejypta, i Usama Saeed Khalil. Voaresaka tamin’izany ny momba ireo endrika fiaraha-miasa azo tanterahina eo amin’ny firenena roa tonta. Anisany ny fananganana fotodrafitrasa sy ny angovo azo avy amin’ny herin’ny masoandro. Nihaona manokana tamin’ny filoha koa ny masoivohon’i Korea Atsimo, i Lim Sang-Whoo, nanambara ny fifaranan’ny fotoam-pisany eto amintsika. Anisan’ireo firenena nanampy an’i Madagasikara tamin’ny ady amin’ny Covid-19 izy ireo tamin’ny alalan’ny laboratoara LA2M eny Androhibe. Resy lahatra amin’ny ho fisandratan’i Madagasikara amin’ny politika apetraky ny filoha ity masoivohon’i Korea Atsimo ity.Synèse R.L’article Fiaraha-miasa: hanangana fotodrafitrasa ny Egypsianina a été récupéré chez Newsmada.
Ambodihady: nidoboka eny Tsiafahy ny lehilahy iray nandratra polisy
Naiditra am-ponja vonjimaika eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy, omaly rehefa avy natolotra ny fampanoavana ny lehilahy iray 22 taona tompon’antoka tamin’ny fandratrana polisy teo am-panatanterahana ny asany teny Ambodihady Ambohimanarina. Araka ny fanazavan’ny polisy, ny 16 jolay tokony ho tamin’ny 5 ora maraina teny Ambodihady Ambohimanarina dia nitrangana fifamaliana teo amina olona roa tao Anosisoa Ambodihady. Nifamaly tamin’ny rafozam-baviny ity lehilahy voasambotra ity noho ny fidirana an-keriny tao an-trano fonenan’ny rafozam-baviny ary nodarohany tao ilay rafozany. Niantso polisy avy hatrany anefa ilay vehivavy vadin’ilay nahavanon-doza ary nilaza tamin’ny polisy fa novonoim-badiny ny reniny mipetraka ao Anosisoa. Tonga ara-potoana ny polisy avy ao amin’ny FIP sy ny avy ao amin’ny kaomisarian’Ambohimanarina (CSP6). Raikitra ny fifanenjehana ka raha vao nahatazana ireo polisy ity lehilahy ity dia nitoraka tamin’ny biriky avy hatrany sady nanompa variraraka. Voa teo amin’ny lohany ny polisy iray ka naratra mafy ary nalefa nentina notsaboina. Tafaporitsaka ilay lehilahy ka nitohy ny fikarohana nataon’ny polisy, tratra tao an-trano fonenany ao Ambodihady izy, ny zoma lasa teo.Jean ClaudeL’article Ambodihady: nidoboka eny Tsiafahy ny lehilahy iray nandratra polisy a été récupéré chez Newsmada.
CARTEL: Manazava ny raharaha Raboanarijaona Holijaona sy Manandafy Mahery Lanto
Rahampitso 20 jona 2019 ny fotoam-pitsarana momba ny fitoriana nataon’ny mpanolontsaina manokan’i Prezidan’ny Repoblika, misahana ny “émergence de Madagascar” an’i Manandafy Mahery Lanto. Niteraka resa-be ny fanehoan-kevitra nataon’i Manandafy Mahery Lanto tao amin’ny tambazotran-tserasera “facebook”. Nambarany fa “fisolokiana ny programan’asa IEM”. Manoloana io fanambarana io dia nitory azy Raboanarijaona Holijaona. Nanao fanambarana ihany koa ny fikambanana Cartel de Madagascar androany 19 jona 2019 fa manohitohina ny fiandrianam-pirenena sy fanalam-baraka no nataon’i Manandafy Rakotonirina. “Programam-panjakana ny IEM ary nahazo fankatoavana avy amin’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Koa nahoana no lazaina fa fisolokiana? ”, hoy ny filohan’ny Cartel, Razanatahiana Florence. Araka ny fanazavan’ity mpisolovava ity hatrany dia io programan’asa io no nampandaniana ny Filoham-pirenena ankehitriny. Niteraka tsy fahatokisana teo anivon’ny mpikambana ao amin’ny Cartel ity raharaha ity. Raha ny fantatra dia fikambanana an-jatony, eto an-toerana sy ny any ivelany no mivondrona ao amin’ny Cartel ary manolo-tanana ny fikambanana rehefa resaka fampandrosoana sy fiarovana ny zon’olombelona. Izany indrindra no nitondrany fanazavana momba ny raharaha Raboanarijaona Holijaona sy Manandafy Mahery Lanto satria miresaka programan’asa ankapoben’ny fanjakana sy manohitohina ny zon’olombelona. Miankina amin’ny tohan-kevitra ho entin’ny andaniny sy ny ankilany eny amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ny tohiny ny raharaha. Nirina R. Cet article CARTEL: Manazava ny raharaha Raboanarijaona Holijaona sy Manandafy Mahery Lanto est apparu en premier sur déliremadagascar.
30 taona nijoroana ny MCCP: miasa ho tombontsoan’ny mpiray tanindrazana
Telopolo taona (1989-2019) teo amin’ny fanompoana ny Fiangonana sy ny fiarahamonina ireo mpikambana ao amin’ny « Firohotana Kristianina Mpiandraikitra sy Mpiasatena » (Mouvement Chrétien de Cadres et de Professionnels na MCCP). Nifotoran’ny MCCP ny tanjona voalohany napetrak’ireo mpanorina, anisan’izany ny fitondrana sy ny fampiroboroboana ny hafatry ny Vaovao Mahafaly amin’ny teny sy ny asa ho tombontsoan’ny mpiray tanindrazana, indrindra ireo mahantra sy sahirana.“Mandrosoa amin’ny lalina kokoa” (Lioka 5,4). Io no lohahevitry ny fankalazana izao faha 30 taona izao, hatao rahampitso 11 mey sy ny alahady 12 mey eny amin’ny Ekar Fanahy Masina, Analamahitsy, Antananarivo, ahitana ny fandraisan’anjaran’ireo mpikambana mihoatra ny 400 avy amin’ny diosezy rehetra eto Madagasikara.Tao anatin’ny 30 taona nitsanganany, nampihatra hatrany ny fomba fiasa mahazatra “Mandinika sy mirotsaka ary miasa” ny MCCP. Maro ireo lohahevitra nodinihina sy notanterahin’ny MCCP nandritra ny kongresy nasionaly nifandimby, mamaritra amin’ny ankapobeny ireo drafitrasa mibaiko ireo hetsika mandritra ny telo taona mialoha ny kongresy nasionaly manaraka.Voninahitra lehibe indrindra ho an’Andriamanitra Ny 11 mey, aorian’ny fanokafana ny vavaka maraina, hisy ny fampianarana sy fanentanana ataon’ny Kardinaly Désiré Tsarahazana ; ny 12 mey, fankalazana ny Eokaristia Masina, tarihin’ny Evekan’i Miarinarivo, Mgr Randrianarisoa Jean Claude, Sekretera Jeneralin’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, arahin’ny fanolorana mari-pankasitrahana ireo “zokiolona mpanorina” ny MCCP. Hisy ihany koa ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny samy mpikambana miaraka amin’ireo lahika sy pretra avy any Afrika sy Eoropa : RDC, Togo, Zimbabwe, Gabon ary Frantsa.Samy handray fitenenana hizara ireo traikefa mikasika ny firohotana Katolika misehatra eo amin’ny Fiangonana sy ny fiarahamonina ankehitriny izy ireo. Aorian’izany, anjaran’ny pretra Ravahatra Fridole Norbert sj, amin’ny maha mpiahy ara-panahy azy, hitondra fanentanana momba ny lohahevitra voalaza etsy ambony.Mifandray amin’ny MIIC – Pax RomanaEo amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena, ny MCCP mifandray maharitra amin’ny fikambanana any Frantsa, sy amin’ny avara-pianarana (Mouvement International des Intellectuels Catholiques na Miic – Pax Romana), mandray anjara tsy tapaka amin’ny fivorian’ny “Miic Pax Romana Africa” sy ny Filankevitra maneran-tany ny “Pax Romana”. Ny Filoha nasionaly, Dokolahy Lainirina Donné, solontenan’ny kaontinanta Afrikanina, hizara ireo tsara ho fantatra nandritra ny Filankevitra maneran-tany ny “MIIC Pax Romana” tany Fribourg, Suisse, ny 18 hatramin’ny 22 marsa 2019.Aorian’izao fanokafana izao, maro ireo hetsika eo amin’ny sehatra nasionaly na eo anivon’ny diosezy tsirairay, ho tanterahin’ireo mpikambana ao amin’ny ekipan’ny MCCP isan-tsokajiny hanamafisana ny “Firosoana amin’ny lalina bebe kokoa ! “ R.MathieuL’article 30 taona nijoroana ny MCCP: miasa ho tombontsoan’ny mpiray tanindrazana a été récupéré chez Newsmada.
Teza: « Hirosoana ny fanorenana ifotony »
Nitondra tolokevitra ho amin’ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanaovana politika ary ny demokrasia. “Tokony hiditra amin’ny fanorenana ifotony ny fitondram-panjakana ka havaozina avokoa ny lesoka rehetra tsy nety, indrindra fa ny lalàna mifehy ny fifidianana, ny lalàn’ny serasera, ny lalàna amin’ny ankapobeny mba hanatsarana azy”, hoy ny filoha nasionalin’ny antoko Teza, Rakotoamboa Jean-Louis. Nohitsiny fa anisan’ny tsy nety ny nandrafetana sy ny fanatanterahana azy fa samy nanao ny tiany hitondrana azy ny mpitondra nifandimby teto. “Ilaina, noho izany, ny fanorenana ifotony mba tsy hisian’ny olana hiverimberina eto amin’ny tany sy ny firenena intsony. Tokony hampanjakaina ihany koa ny tena demokrasia hipetrahan’ny tena tany tan-dalàna”, hoy ihany ity mpitarika antoko politika ity. Efa nivoy hatramin’ny ela ny tokony hanaovana ny fanorenana ifotony ny eo anivon’ny antoko Teza, saingy tsy nisy nihaino sy nanaraka. Vita ihany ireo fifidianana nifanesy teto amin’ny firenena.Synèse R. L’article Teza: « Hirosoana ny fanorenana ifotony » a été récupéré chez Newsmada.
Fakafaka: taitaitra satria very fototra?
Na diso na marina ny fanambaran’ny Papa Fransoa. Na niteny na tsy niteny an’iny izy. Na nankatoa na tsy nankatoa ny fanambadian’ny mitovy fananahana izy. Inona ny tokony hampitsangam-bolo ny Malagasy amin’izany? Sanatria, tsy fanamaivanana ny tranga tahaka ireny akory fa matoa misy ny taitra, gaga, tezitra, mivarahontsana, malahelo, ketraka, mitebiteby, sns, olona tsy manana fototra ijoroana izy izay. Raha tena iainan’ny Malagasy ny kolontsainy, tsy misy tokony hahina sy hatahorana ny fielezan’iny vaovao iny. Tsy kolontsaina malagasy mihitsy ny fanambadian’ny mitovy fananahana. Iny safotofotom-baovao iny no nanaporofo indray fa tsy miaina amin’ny kolontsainy sy ny fomba amam-panaony ny Malagasy sasany. Na, tsy mahafantatra akory ny momba azy ka sahiran-tsaina avy hatrany raha vao lalovana lamokam-baovao.Kolontsaina malagasy anisan’ny faratampony ny fanajana ny lalana voajanahary. Raha miaina izany hatramin’izay ka hatramin’izao ny Malagasy, tsy misy tokony hatahorana. Saingy, tsy izay ny zava-misy! Efa tazana etsy sy eroa ireo ampahana Malagasy very fototra sy atsingevan’ny « fandrosoana ». Eo koa ny Malagasy endrika ivelany fa poakaty. Na, feno ihany fa hipoky ny kolontsaina sy ny fomba amam-panaon’ny hafa. Fanambadian’ny mitovy fananahana, tsy tokony ho tafiditra eto raha nanaraka ny lamina voajanahary ny Malagasy! Misy adidy tsy efa ao. Anisan’ny tsy afa-bela amin’izany ny ray aman-dreny. Tsy notaizanareo amin’ny kolontsaina malagasy ve ny taranakareo no sahy manao tsinontsinona an-Janahary sy ny lamina napetrany?… Na izany na tsy izany, misy manozongozona mafy ny kolontsaina malagasy. Tsy vao izao io fa efa ela. Iray amin’ireny ny fampifangaroana ny finoana (araka ny nitondran’ny vahiny azy) sy ny fahalalana (niainan’ny Malagasy)… Sa ve manam-pahalalana lavitra no ho i Zanahary ny sasany ka sahy manao tsinontsinona ny lamina napetrany? Raha izay indray, azy ny azy fa tsy an’ny Malagasy rehetra!HaRy RazafindrakotoL’article Fakafaka: taitaitra satria very fototra? a été récupéré chez Newsmada.
SALON DE L’ETUDIANT – SPECIAL TOAMASINA : Natao ho an’ny mpianatra maniry hanohy fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony
Hatrany amin’ny fahazoana “stage”. Vita soamantsara ny fanadinana bakalorea 2020. Maro amin’ireo mpiadina no maniry ny hanohy ny fianarany eny amin’ny ambaratonga ambony. Nanokana hetsika ho an’ny mpianatra any Toamasina ny Mada Jeune ho fanampiana azy ireo amin’ny fitadiavana sekoly ambaratonga ambony na ivon-toeram-pampiofanana mifanaraka amin’ny lalam-piofanana mahaliana azy ireo. Ny zoma 30 sy ny sabotsy 31 oktobra 2020 ao amin’ny Foyer Tranovato Fjkm Anjoma no hanatanterahana ny “salon de l’étudiant-spécial Tamatave” andiany fahatelo. “ Natao hanampiana ireo vao afaka bakalorea amin’ny fahazoana antotam-baovao momba ny anjerimanontolo eto Madagasikara sy any ivelany ity hetsika ity. Ho amin’ity taona ity dia handray mpianatra anarivony izahay ary ao anatin’ny fanajàna ny fepetra ara-pahasalamana izany”, hoy ny mpikarakara. Nambarany fa am-polony ny trano heva. Mandritra ny roa andro dia hanome ny andinidininy momba ny sampam-piofanana, ny saram-pianarana, ny antontan-taratasy ilaina, ny fomba ahazoana fanazaran’asa ireo mpandray anjara toa ny sekoly ambaratonga ambony tsy miankina IEP- ESMIA – IMT – ISMATEC – CEFOMAR – ALLIANCE FRANCAISE DE TAMATAVE CAMPUS France – ESCM – ATOUT TOURISME – STUDYDAS – CURTIN MAURITIUS – CNTEMAD ESTIIM – MCCI Mauritius – ZAFIMANE INSTITUT – MALAGASY INITIATIVE – VATEL MADAGASCAR… Lynda A. Cet article SALON DE L’ETUDIANT – SPECIAL TOAMASINA : Natao ho an’ny mpianatra maniry hanohy fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article SALON DE L’ETUDIANT – SPECIAL TOAMASINA : Natao ho an’ny mpianatra maniry hanohy fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony a été récupéré chez Délire Madagascar.
Nitondra fanazavana ho an’ny vahoaka sy ny kristianina, indrindra ny katolika. “Hamafiso ny finoana ary aza mihinana amam-bolony manoloana ny vaovao tsy marina niniana naely momba ny fanambaran’ny papa Fransoa”, hoy ny kardinaly Tsarahazana Désiré. Nanao fanambarana ofisialy sy filazana momba ny hevitry ny eglizy katolika ny filohan’ny fivondronamben’ny eveka eto Madagasikara, ny kardinaly Tsarahazana Désiré, omaly. Namaly ny vaovao nivoaka tamin’ny haino aman-jery vahiny nanambara fa ankatoavin’ny Papa Fransoa ny fanambadiana sivily eo amin’ny olon-droa lahy samy lahy na vavy samy vavy ny tenany. “Tsy marina velively izany fanambarana izany ary tsy niova ny fampianaran’ny fiangonana katolika momba ny fanambadian’ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy”, hoy izy. Navoitran’ny papa Fransoa fa tsy tokony hafangaro ny fianakaviana araka ny sitrapon’Andiamanitra avy amin’ny fanambadian’ny lahy sy ny vavy misokatra amin’ny fiterahana sy ny karazana firaisana hafa. Hita mazava tamin’ny taratasy ofisialy farany maneho ny fampianaran’ny eglizy momba io resaka io amin’ny fanentanana mitondra ny lohateny ny « Hafalian’ny fitiavana » ny 19 marsa 2016, navoakan’ny papa sady nosoniaviny.Tokony ho mailo sy ho tony…Sombin-dresaka nalaina avy amin’ny tafatafa niarahan’ny papa Fransoa tamin’ny mpanao gazety meksikanina, 18 volana lasa izay, niampy ampahan-dresaka tamin’ny mpampahalala vaovao hafa (tao anaty fiaramanidina) ny natambatra tao anaty fehezanteny ka nanova tanteraka ny hevitry ny Papa rehefa novoizina tamin’ny haino aman-jery any ivelany nandritra ny fetin’ny sarimihetsika tany Roma, ny 21 oktobra lasa teo. Nohamafisiny fa tsy marina hatrany izany rehefa mpilaza vaovao amin’ny firenena lehibe no manambara zavatra iray. Tokony ho mailo sy ho tony ny rehetra, indrindra ny mpino katolika ary izany indrindra ny nitondrany fanitsiana. “Famitahana avo lenta ny nitranga ka niteraka sahotaka sy fanehoan-kevitra maro isan-karazany”, hoy ihany izy.Maro ny olona niandry izany fanehoan-kevitra ofisialy avy amin’ny eglizy katolika izany.Vonjy A.L’article Kardinaly Tsarahazana – Hevitry ny papa Fransoa: “Vaovao diso sy famitahana avo lenta ny naely” a été récupéré chez Newsmada.
Fisotroan-dronono sy ny fiara 4×4: mihamahery vaika ny fanoherana ny fitakian’ireo depiote
Tsy mbola tara raha miverina amin’ny fanapahan-kevitra ? Totoafo ny fitsipahana marindrano ny fitakian’ireo depiote ny tombontsoa : fiara tsy mataho-dalana sy ny fisotroan-drononon’izy ireo. Hita any anaty tambajotran-tserasera sy heno amin’ny antso an-telefaonina amin’ireo haino aman-jery samihafa eto an-dRenivohitra izany. Vao mainka nampirongatra izany tsy fankasitrahana izany ny nilazan’ny depiote iray avy amin’ny fitondrana ny tombontsoa sy ny vola raisin’izy ireo eny Tsimbazaza, tamin’ny fahitalavitra iray, afakomaly alina.Tafakatra 12 ny isan’ireo “Assistant parlementaire”Tsy vitan’izany fa nampiakarina ho 12 ireo mpanampy “Assistant parlementaire” isaky ny depiote. Valo anefa ny isan’izany teo aloha. Mbola hiampy indray izao fitakiana fiara 4×4 sy ny fisotroan-dronono izao izany. Efa nanitrikitrika ny tsy fankasitrahana izany koa ny eo anivon’ny sendikà maromaro. Teo koa ny mpisolovava, ny Me Olalah.Etsy andaniny, niaro tanteraka izany fitakian’ny depiote izany ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine. “Tsy mitovy amin’ireo fisotroan-dronono rehetra izany. Mety hampitondraina anarana hafa izy io. Mbola hapetraka ao anatin’izany avokoa ny fomba fahazoana izany na ho isam-bolana na mety amin’ny fiafaran’ny fe-potoam-piasana”, hoy izy.Anaty covid sy kere ary ny fiharianaAraka izany, mbola anaty ady amin’ny covid-19 izao firenena. Miaina kere ny any atsimo ary mbola ho henjana ny hanarina ny fihariana nefa ny tombontsoan’izy ireo no mahamaika. Mpanao lalàna handidy dia homana avy hatrany.Raha tena mijery ny tombontsoan’ny vahoaka izy ireo, tsy olana ho an’ny olona ny hanampy sy hiaraka hiady aminy izany tombontsoany izany. Tsy izany anefa aloha izao ny zava-misy.Synèse R.L’article Fisotroan-dronono sy ny fiara 4×4: mihamahery vaika ny fanoherana ny fitakian’ireo depiote a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny aretina lefakozatra: hitady vola 50 tapitrisa dolara isan-taona ny Rotary
Raha nahatratra 350 000 isan-taona ny trangana lefakozatra tamin’ny firenena 125 ny taona 1988, ampolony sisa voatily amin’izao fotoana izao vokatry ny ezaka fanaovam-baksiny faobe tokony hotohizana.Ho fanohizana ny ezaka efa vita ka nahazoan’i Madagasikara ny fanamarinana fa afaka amin’ny aretina lefakozatra izy, ny taona 2018, tsy maintsy hatao hatrany ny fanaovam-baksiny faobe miaro amin’io aretina io ho an’ny zaza vao teraka ka hatramin’ny herintaona. Mitaky volabe ny fanatanterahana izany ka nanambara ny fikambanana Rotary fa hamory vola 50 tapitrisa dolara isan-taona hamongorana ny aretina lefakozatra. Ny fondation Bill sy Melinda Gates kosa, hampitombo avo telo heny ny tohana ka hahazoana famatsiana hatramin’ny 150 tapitrisa dolara. Nanomboka ny taona 1985 ny hetsika nataon’ny fikambanana Rotary maneran-tany iadiana amin’ny aretina lefakozatra. “Tranga ampolony sisa miseho amin’izao fotoana izao vokatry ny asa vita izay hotohizana hanafoanana tanteraka ity aretina ity”, hoy ny governoran’ny district 9 220 ny Rotary international, Randriamifidy Emmanuel. Hatreto, nanokana vola mitentina 2,1 miliara dolara nampiasaina iadiana amin’ny lefakozatra ny fikambanana Rotary. Ho fanamarihana ny Andro maneran-tany iadiana amin’ity aretina ity, niantso ny malala-tanana, ny orinasa, ny fikambanana hanao tolo-tanana ahafahana manao vaksiny ankizy maro ny fikambanana, teny amin’ny Parvis Analakely ny faran’ny herinandro teo. Tsy teto Antananarivo ihany fa nisy koa ny fanamarihana ny Andro maneran-tany iadiana amin’ny aretina lefakozatra tany amin’ny faritra niarahana amin’ny fikambanana Rotary any an-toerana.Entanina koa ny renim-pianakaviana sy ny mpikarakara zaza hitondra ny zanany hatao vaksiny satria nihena ny isan’izy ireny nandritra ny ny fihibohana noho ny tahotra ny valanaretina Coronavuris. Nitohy hatrany anefa ny fandraisana teny amin’ny CSB rehetra fa napetraka fotsiny ny fepetra ara-pahasalamana. Misy koa ny famerenana ny vaksiny ho an’ireo tsy nahavita izany mandritra ity volana oktobra ity.Vonjy A.L’article Ady amin’ny aretina lefakozatra: hitady vola 50 tapitrisa dolara isan-taona ny Rotary a été récupéré chez Newsmada.
Mpanao gazety sy mpanakanto : napetraka ho zava-dehibe ny fifampitaizana
Somary nihenjan-droa ny tady tato ho ato eo amin’ny mpanao gazety misahana ny kolontsaina sy ny mpanakanto na tsy hita niharihary be aza izany. Nisy ny dinika nifanaovan’ny solontenan’ny roa ton­ta, omaly tetsy amin’ny CGM Analakely, nandravonana ny lesoka. Nisongadina tao anatin’izany fa mila hampitomboina ny serasera eo amin’ny mpanao gazety misahana ny kolontsaina sy ny mpanakanto hifankahalala bebe kokoa eo amin’ny asa iandraiketan’ny tsirairay izy ireo. Hapetraka ho zava-dehibe ny fifampitaizana hisian’ny lamina sy ny fifandrohizan’asa eo amin’ny roa tonta. Nomarihin’ny solontenan’ny CGM Analakely fa mila mifampiresaka ihany koa ny samy mpanakanto sy ny samy mpanao gazety misahana ny kolontsaina satria endriky ny fifampitaizana sy ny fifampitan-kafatra ihany koa izany.Nanangona : HaRy RazafindrakotoL’article Mpanao gazety sy mpanakanto : napetraka ho zava-dehibe ny fifampitaizana a été récupéré chez Newsmada.
Herinandron’ny Havàtsa-Upem: « Tanteraka ny fanamby », hoy i Hajaina Andrianasolo
Mitohy hatrany ny ezaka ho fanomezan-danja ny soratra. Manana anjara toerana lehibe amin’izany ny Havàtsa-Upem. Misy ny hetsika tanterahin’izy ireo mandritra ity herinandro ity…« Efa tany amin’ny volana aogositra ny nieritreretana hanatanterahana ny « Herinandron’ny Havàtsa-Upem »… Ankehitriny, tanteraka ny fanamby na mbola eo aza ny fahasahiranana nateraky ny Covid-19 », hoy i Hajaina Andrianasolo, filohan’ny fikambanan’ny poety sy mpanoratra malagasy Havàtsa-Upem. Nanteriny fa mavitrika ny mpikambana sady mikendry hatrany ny hanao zavatra tsara ka tsy nataon’izy ireo ho sakana ny fotoana lava tsy nanaovana hetsika.Nomarihiny koa fa « velona ho velona ny haisoratra malagasy ». Tazana etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely izany, mandritra ity herinandro hanatanterahana ny « Herinandron’ny poety 2020 » ity. Fampirantiana asa soratr’ireo mpanoratra teo aloha sy ny ankehitriny. Misy amin’izy ireny ny tafiditra ao anatin’ny fandaharam-pianarana. Fihaonana amin’ireo mpanoratra. Antsan-tononkalo sy varo-boky, sns.Fantatra fa maro ireo mpampianatra mikasa hitondra ny mpianany eny an-toerana. « Tsara raha tonga izy ireny satria hanampy azy ireo ny zavatra ho hita ety. Na izany aza, mila hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19 », hoy hatrany ny filohan’ny Havàtsa-Upem. Ny asabotsy 31 oktobra vao hifarana ny « Herinandron’ny poeta 2020 » ka ny alarobia tolakandro no hanatanterahana ny « Alarobia miverina » hiantsana tononkalo.HaRy RazafindrakotoL’article Herinandron’ny Havàtsa-Upem: « Tanteraka ny fanamby », hoy i Hajaina Andrianasolo a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa: nanome vola iadiana amin’ny Covid-19 ny Frantsay
Mitentina 1,5 tapitrisa euros na 6 miliara Ar ny fitambaran’ny vola avy amin’ny Frantsay, nanaovana sonia fifanarahana vola natrehin’ny masoivoho frantsay sy ny Agence française de développement sy ny vondrona ONG roa, soloin’ny Action Action contre la faim et humanité sy ny Inclusion, tena omaly.Entina hanampiana ny fanamafisana ny hetsika hamongorana ny valanaretina Covid-19 ny vola nomena.Tanjon’ity fanohanana ity ny hitondra firaisankina, fiaraha-miasa mivaingana ary eo no ho eo, ao anatin’ny fanomezan-toky sy ny fanohanan’i Frantsa ny vahoaka malagasy. Hanampy amin’ny fampihenana ny taham-pahafatesana noho ny valanaretina ireo fikambanana hiantsehatra amin’ny asa. Eo koa ny fanalefahana ny fiantraikan’ny valanaretina amin’ny sosialy.Manampy ny vondrona ONG roa hamaly amin’ny fomba haingana sy mifanaraka amin’ny filàna ankehitriny ny zavatra hatao. Iandraiketan’ny vondrona Action contre la faim, ny Action socio-sanitaire organisation secours, ny Care, ny Médecins du Monde ny asa miaraka amin’ny tetikasa Setriny amin’ny krizy ara-pahasalamana….Ny tetikasa “Miaro tena aho, ho fiarovako ny hafa” (Mitehafa) ataon’ny vondrona Humanité sy Inclusion, ny Douleurs sans frontières ary ny SOS Village d’Enfants kosa, hanampy amin’ny fandrindrana ny fihetsika manoloana ny valanaretina.Ho voakasiky ny asa ao anatin’ity tohana ity ireo olona maherin’ny 80 0000. Anisan’izany ny mpiasan’ny fahasalamana 1 034, ny mpiasa ny fampianarana 10 921, ny mpianatra sy ray aman-drenin’ny mpianatra, 66 400.Eo koa ny olona misitraka hetsika fanentanana, fanohanana haipisaina sy hetsipon’ny fiarahamonina sy ny fanohanana hahalala momba ny aretina amin’ny fanabeazana. Tsy hadinoina ireo marary 387 natoka-monina miisa 830 sy ny mpisehatra momba ny firaisa-monina hanenika ny faritra 11 laharam-pahamehana eto Madagasikara. Miparitaka amin’ny faritra Analamanga, Analanjirofo, Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana, Atsinanana, i Boeny, i Bongolava, i Diana, Itasy ary i Vakinankaratra ny asa hatao.Tatiana AL’article Fiaraha-miasa: nanome vola iadiana amin’ny Covid-19 ny Frantsay a été récupéré chez Newsmada.
Filoha Rajoelina Andry tany Ambatondrazaka : “Tsy fotoan’ny kabary izao, aleo tsaraina amin’ny asa vita”
Tanàna iva ka tsy afa-bela amin’ny fota-mandrevo sy ny fiakaran’ny rano ny any Amba­tondrazaka nandritra ny fotoana maro, araka ny nambaran’ ny mponina. Nampiakarina ambony ny ankamaroan’ny ny haavon’ny lalana. Mafy orina sy mahazaka ny tosiky ny rano izany. Azo antoka fa haharitra ny fotodrafitrasa rehetra naorina, toy ny lalana sy ny tetezana… Novana ho “Tetezan’ny Fihariana” ny eo Manainga­zipo teo aloha. Efa vita ampahany ny fanatanterahana ny asa fananganana tetezana « pont Kafe » miaraka amin’ ny fanaovana ho tara ny lalana Ambatondrazaka mankany Ambandrika sy ny tetezana. Ho vita mialoha ny volana desambra izao izany, miaraka amin’ny fanaovana ho tara ny lalana 25 km ao Vohidiala, Manakambahiny Andrefana. “Holovain-jafy ny fotodrafitrasa, tahaka izao, ary tsy fotoan’ny kabary intsony izao fa maso miara-mahita isika izao”, hoy ny filoha Rajoelina Andry any an-toerana, omaly. Anisan’ny nojereny ny faha­vitan’ny fanamboarana ny lalana tara, 800 m, miainga eo amin’ny seranam-piaramanidin’i Feramanga – Avaratra mivoaka ny lalam-pirenena RN44. Nametrahana andrin-jiro koa ny faritry ny seranam-piaramanidina sy ny lalana. Natao hahazaka fiaramanidina ATR ity seranana ity, manomboka izao. “Zava-dehibe ny sidina anatiny ialana amin’ny fitokanam-monina. Tanàna mamokatra nefa izao vao misy zava-bita goavana eto hatramin’ny nahazoana ny Faha­leovantena”, hoy ihany izy. Vita koa ny fananganana ny EPP manara-penitra ao Amba­tondrazaka. Ahitana ny kilasy « préscolaire » hatramin’ny T5 ny EPP. Hisy fampitao­vana « informatique » sy « can­tine scolaire » koa izany. Ma­nampy izany ny dabilio, ny biraon’ny mpampianatra sy ny fitaovam-pampianarana.Maimaimpoana ny fidiran’ ny zaza an-tsekolyNotsiahivin’ny filoha ta­min’izany fa hahazo “kits scolaires” ireo mpianatra ao an-toerana. Maimaimpoana koa ny fidirana an-tsekoly hampitomboina isa ireo zaza hianatra ka nisy vola 20 miliara Ar ny hatokana amin’ny “caisse ecole”. Ankoatra izany, efa mandroso sy an-dalam-pamaranana ihany koa ireo fotodrafitrasa sasany. Vita 80% ny fananganana ny kianja manara-penitra Rasolonjatvo ao Ambaton­dra­zaka. Efa voapetraka ny « tapis synthétique ». Efa voa­tsangana ny « tribune » ary nampitomboina izany raha mitaha amin’ny teo aloha. Ankoatra izany, efa miditra amin’ny ampahany faharoa ny fanamboarana ny lalam-pirenena RN44, amin’izao fotoana izao. Tombanana ho vita amin’ny taona ho avy izany.Synèse R.L’article Filoha Rajoelina Andry tany Ambatondrazaka : “Tsy fotoan’ny kabary izao, aleo tsaraina amin’ny asa vita” a été récupéré chez Newsmada.
Enina ireo lavo: 158 ny tranga vaovao
Misoko mangina tsy re tsaika. Miisa enina ireo lavon’ny Covid-19, tao anatin’ny herinandro. Teo anelanelan’ny 17 hatramin’ny 23 oktobra izany. Manodidina ny iray isan’andro eo ho eo izany ireo matin’ity valanaretina ity eto amintsika ary mananika ny 244 izao ireo nodimandry hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Efa manakaiky ny 250 izany.Etsy andaniny, miisa 158 ireo tranga vaovao tao anatin’izany herinandro izao. Manodidina ny 26 isan’andro eo ho eo izany ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina eto amintsika. Miisa 86 kosa anefa ireo sitrana. Tafakatra 16 301 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana amin’ireo 16 968 mitondra Covid-19 eto Madagasikara hatramin’ny nisian’ny valanaretina. Izany hoe, misy 423 izany ireo mbola manaraka fitsaboana.Synèse R.L’article Enina ireo lavo: 158 ny tranga vaovao a été récupéré chez Newsmada.
Partenaire clé dans la transformation économique de l’Afrique. Axian group rejoint ce mardi 27 octobre 2020 le fonds d’investissement African Development Partners III (ADP III) géré par Development Partners International (DPI). DPI a investi dans 23 entreprises de 29 pays africains, en s’appuyant sur son expertise et son réseau d’investissement qui ont permis de réaliser de solides performances. Avec plus de 1,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, DPI investit dans des entreprises qui sont en mesure de bénéficier de la croissance rapide de la classe moyenne émergente. ADP III suit donc les traces de ses prédécesseurs en se focalisant sur les entreprises leaders œuvrant avec les gestionnaires pour développer les bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Opportunités de diversification et d’expansion panafricaine Grâce à cette collaboration, Axian entend concrétiser son ambition d’être un partenaire clé dans la transformation économique de l’Afrique. Par l’intermédiaire des entreprises dans son portefeuille, DPI offre une perspective et un accès unique aux transactions réalisées sur le continent. « Cette plateforme d’investissement nous permettra de mettre en valeur nos relations afin de créer des opportunités de co-investissement stratégique ou d’acquisition à la sortie des fonds, là où des synergies avec nos activités principales sont disponibles. Nous saisirons en outre les possibilités de collaboration future avec les gestionnaires de fonds sur des transactions externes favorisant l’innovation et nécessitant un regroupement de compétences », déclare Hassane Muhieddine, CEO AXIAN Financial Services. Favorisant la création de valeur et le développement économique durable, le portefeuille d’investissement panafricain d’ADP III offre à Axian une voie naturelle vers une diversification indirecte de ses opérations stratégiques, tant sur le plan sectoriel que géographique en Afrique. Recueillis par Nirina R. Cet article INVESTISSEMENT PANAFRICAIN : Axian rejoint ADP III est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article INVESTISSEMENT PANAFRICAIN : Axian rejoint ADP III a été récupéré chez Délire Madagascar.
Tonton Pa, Rampal, José Hasina: mitohy hatrany ny “Vazon’ny tanàna”
Efa zary seho nahenoina fankasitrahana maro ny « Vazon’ny tanàna » iarahan’i Tonton Pa sy i Rampal ary José Hasina. Nanapa-kevitra ny mpikarakara fa hotohizana izany…Hafampana ny faran’ny herinandro… Mitohy indray ny “Vazon’ny tanàna” miaraka amin-dry Tonton Pa, Rampal, José, tarika Hasina. Anio manomboka amin’ny 7 ora hariva ny lanonana hotanterahina etsy amin’ny La Cabane Jacks, Andavamamba anoloan’ny Alliance française. Mpihira efa tsy zovina amin’ny maro intsony ny hitondra ny mozikany amin’io fotoana io. Mpanakanto anisan’ny nanamarika ny fahazazan’ny tanora, ankehitriny, izy ireto ary azo lazaina ho mpihira tsy lefy laza, nahatety vanim-potoana maro ihany koa.Samy manana ny hanitra ho azy, indrindra eo amin’ny lafiny feo sy ny famoronan-kira, izy telo mirahalahy ireto. Hovetsoina ao avokoa ireo hira nanamarika azy ireo teo amin’ny tontolon’ny mozika. Anisan’izany ny “Babonao”, ny “Fonjan’i neny”(José); ny “Mbola tsy mora”, ny “Dia ahoana?” (Tonton Pa); ny “Cyclone”, ny “Tsy misy nenina” (Rampal). Efa manomboka miverina tsikelikely ny hetsika zavakanto isan-karazany amin’izao, saingy mila manaja ny fepetra ara-pahasalamana hatrany tsy hiparitahan’ny valanaretina Coronavirus indray na efa afaka amin’ny fihibohana aza ny eto Madagasikara ankehitriny.NarilalaL’article Tonton Pa, Rampal, José Hasina: mitohy hatrany ny “Vazon’ny tanàna” a été récupéré chez Newsmada.